Umatshini wokuLayibhela ngokuzenzekela
Umatshini wokuLayibhela oSemi-Auto
Umatshini wokuLayibhela iibhotile
Ibhokisi/iKhathoni kunye nabanye oomatshini bokuFakela iiLayibhile bangaphezulu
Ikhadi/Ibhegi/Izingxobo zokuLeyibhela uMtshini
Umatshini wokuLayibhela oMacaleni weeMveliso
Umatshini wokuLayibhela umgca weMveliso
Ileyibhile kumatshini oneleyibhile yokuShicilela
Ukutywina umatshini wokuFaka iiLayibhile
Lungiselela uMatshini wokuLayibhela
Umatshini wokugcwalisa ngokuzenzekela
Umatshini wokuzalisa iSemi-automatic
Umatshini wokuQhaphaza ngeScrew
Ukucutha ukutywina kunye noomatshini bokusika
Abanye oomatshini bokuPakisha
Umbuzo: Ngaba ungumzi mveliso?
A: SinguMvelisi obekwe e-Dongguan, eChina.Ezikhethekileyo kumatshini wokulebula kunye noshishino lokupakisha iminyaka engaphezu kwe-10, sinamawaka amatyala abathengi, siyakwamkela ukuhlolwa kwefektri.
Q:Ungaqinisekisa njani ukuba umgangatho wakho wokuleyibhela ulungile?
A:Sisebenzisa isakhelo soomatshini esomeleleyo kwaye sihlala ixesha elide kunye nezahlulo zombane zeprimiyamu ezifana nePanasonic,iDatasensor,SICK...ukuqinisekisa ukusebenza ngokuzinzileyo kokuleyibheli.Ngaphezu koko, iilebhile zethu zivunyiweyo zeCE kunye ne-ISO 9001 kwaye zinezatifikethi zepatent.Besides,Fineco yawongwa ngesiTshayina “Ishishini elitsha lobuGcisa obuPhezulu” ngo-2017.
Q:Bangaphi oomatshini abakhoyo kwifektri yakho?
A:Sivelisa umatshini wokuncamathelisa oqhelekileyo kunye owenziwe ngokwezifiso.Ngomgangatho we-automation, kukho iilebhile ezizenzekelayo kunye ne-automatic labeler;Ngokwakheka kwemveliso, kukho iilebhile zeemveliso ezingqukuva, iilebhile zeemveliso zesikwere, iilebhile zeemveliso ezingaqhelekanga, njalo njalo.Sibonise imveliso yakho, isisombululo sokuleyibheli siya kunikwa ngokufanelekileyo.
Q:Ithini imiqathango yakho yokuqinisekisa umgangatho?
IFineco iphumeze ngokungqongqo uxanduva lwesithuba,
1) Xa uqinisekisa umyalelo, isebe loyilo liya kuthumela uyilo lokugqibela lokuqinisekisa kwakho ngaphambi kokuveliswa.
2) Umyili uya kulandela isebe lokucubungula ukuqinisekisa ukuba iindawo zomatshini ngamnye zicutshungulwa ngokuchanekileyo nangexesha.
3) Emva kokuba zonke iinxalenye zenziwe, uxanduva lokudlulisela umyili kwiSebe leNdibano, ekufuneka lihlanganise izixhobo ngexesha.
I-4) Uxanduva oludluliselwe kwiSebe loLungiso kunye nomatshini odibeneyo.Intengiso iya kujonga inkqubela phambili kunye nempendulo kumthengi.
5) Emva kokujonga ividiyo yomthengi / ukuhlolwa kwefektri, ukuthengisa kuya kulungiselela ukuhanjiswa.
6) Ukuba umthengi unengxaki ngexesha lokufaka isicelo, uThengiso luya kucela iSebe lezentengiso emva kokuba liyisombulule kunye.
A:Siza kugcina uYilo lwaBathengi bethu bonke, iLogo, kunye neSampulu koovimba bethu, kwaye singaze sibonise kubathengi abafanayo.
Umbuzo: Ngaba kukho naluphi na ulwalathiso lofakelo emva kokuba sifumene umatshini?
A: Ngokubanzi ungafaka ilebula ngokuthe ngqo xa uyifumene, kuba siyilungelelanise kakuhle nesampulu yakho okanye iimveliso ezifanayo.Besides, incwadi yokufundisa kunye neevidiyo ziya kunikwa.
Umbuzo: Yeyiphi imathiriyeli ileyibhile esetyenziswa ngumatshini wakho?
A: Isincamathelisi esizincamatheleyo.
Umbuzo: Loluphi uhlobo lomatshini onokuhlangabezana nemfuneko yam yokuleyibhela?
A: Ii-pls zibonelela ngeemveliso zakho kunye nobukhulu belebhile (umfanekiso weesampuli ezibhaliweyo uluncedo kakhulu), emva koko isisombululo esifanelekileyo sokulebula siya kucetyiswa ngokufanelekileyo.
Umbuzo: Ngaba kukho nayiphi na i-inshurensi yokuqinisekisa ukuba ndiya kufumana umatshini ochanekileyo endiwuhlawulayo?
A: Singumthengisi wetshekhi kwindawo evela eAlibaba.UQinisekiso lwezoRhwebo lubonelela ngokhuseleko lomgangatho, ukhuseleko lokuthunyelwa ngexesha kunye ne-100% yokhuseleko lokuhlawula olukhuselekileyo.
Q: Ndingazifumana njani ii-spares zoomatshini?
A: Ii-spares ezonakalisiweyo ezingezizo ezenziweyo ziya kuthunyelwa ngokukhululekileyo kwaye zihanjiswe simahla ngexesha lewaranti ye-1.
Idilesi: No. 15, Xingsan Road, Wusha, Chang'An Town, Dongguan City, Guangdong Province
© Copyright 20132021: Onke Amalungelo Agciniwe.